तनुहु कारागारबाँट पल शाहको भिडियो सन्देश : सत्यको जित हुन्छ ढिला चाडो – Sandes Post
April 24, 2022 1928
आफूलाई अभिनेता पल शाहले कर णी गरेको भन्दै मुद्दा दर्ता गरेकी किशोरीले पूर्वी नवलपरासीको जिल्ला अदालतमा पनि आफ्नो बयान फेरेकी छन् ।
पीडितले बयान फेरेपछि उनको पक्षबाट बहस गरेकी अर्की अधिवक्ता सरिता तिवारीले यो मुद्दामा शक्ति र पैसा दुरुपयोग भएको संकेत गरेकी छन्।
‘कर णी लगायत यौ’ ‘न दु’र्व्य’व’हा’रका मुद्दामा राज्यबाट पीडितको सुरक्षा समावेदनशीलताबारे स्पष्ट नीति र अभ्यास नहुँदा पीडित स्वयं प्रतिवादी जोगाउने ह’ति’या’र बन्न पुग्छन्! पल शाह प्रकरणको यो मोड शक्ति,पैसा र प्रभावको अर्को विडम्बनायुक्त उदाहरण हो,’ तिवारीले ट्विटरमा लेखेकी छन्।
पललाई थाहा थियो, पीडित नाबालिगले उनलाई गहिरो प्रेम गर्थिन्। सरकारी वकिलसम्म बयान दिँदा पनि उनले यो भनेकी थिइन्। विश्वस्त स्रोतका अनुसार पलले आफू उम्किने कुनै विकल्प नपाएपछि पीडित नाबालिगको बयान फेराउन जेलबाट निस्किएपछि बिहे गर्ने आश्वासन नै दिएका छन्।
Prevइन्डियन आइडल विजेता पवनदीप राजन काठमाडौंमा
Nextकतार वैदेशिक रोजगारीका लागि धेरैको रोजाइम, कति वृद्धि भयो तलब ?
गायिकासँग लफडामा परेका पल शाहका लागि आयो खुसीको खबर, बन्यो नयाँ रेकर्ड !
नाबालिग गायिकासँगको घट`नामा फसेका पल शाहको रोचक दैनिकी, भित्र पनि प्रशंसा !